Nchikota New Zealand: nchikota nke ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu ndi ozo: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 March 2019	• 29 Comments
Ọ bụrụ na mwakpo nke 'Brenton Harrison Tarrant' na Christchurch na New Zealand abụghị ọkachamara, mgbe ahụ, ọ na-eme nnukwu ihe omume ahụ. Na-achọpụta ihe ebubo iyi ndụ iyi ihe oyiyi, na-arụ ụka na ọ nwere ike inye ọtụtụ ndị echiche nke ime mwakpo, bụ onye zuru okè maka ụwa niile nyocha mgbasa ozi mgbasa ozi ịghọ ụkpụrụ. Ị nwere ike ịnọ na-eche onye nọ na-ele ndụ dị otú ahụ ma ọlị? Ndi mara ọkwa ya na ndi enyi enyi ya? Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ndị mmadụ chọrọ ịhụ ihe oyiyi ndị ahụ, n'ihi na gịnị ka mgbasa ozi na-eme ruo ọtụtụ afọ mgbe ha na-egosi anyị ihe agha nke agha ma ọ bụ ụjọ? "Mwakpo" ahụ bụkwa ezigbo ihe kpatara ya mkpochapu nke ndi mmadu ịbanye. N'ikpeazụ ma ọbụlagodi, ọ na - eme ka ụbụrụ dị n'etiti aka ekpe na aka nri na okpukpe dịka akọwapụtara ya isiokwu a.
Anyị na-agba àmà nke edemede nke ga-etinye ntọala maka ọchịchị zuru ụwa ọnụ. Gọọmentị ụwa a na-agbalị maka otu okpukpere chi nke ụwa, otu nwoke na agbụrụ. Nke a ga-eme site na Rom oge ochie 'Ordo ab Chao' (iwu nke ọgba aghara). Maka nke a, ndị bi n'ụwa ga-ebu ụzọ buru agha ụwa nke atọ (dị ka edemede ahụ), bụ nke metụtara ọdịmma okpukpe. Amụma ndị dị n'okpukpe ụwa dị mkpa na-arụ ọrụ dị mkpa na nke a. Ozugbo agha maka Jerusalem agafeela, ndị mmadụ n'ụwa ga-ada mbà ma nwee nkụda mmụọ ma nakweere Luciferian ọhụrụ UN ụwa. Maka usoro a, esemokwu okpukpe aghaghị ibu ụzọ nụchaa. Ihe m chere bụ na Alakụba Islam ga-enweta ike. Ekwenyere m na Turkey ga-arụ ọrụ kachasị na nke a site na ịkpọlite ​​Alaeze Ukwu Ottoman n'ọnwụ. N'otu oge ahụ, anyị ga-ahụ ike United States crumble. M ga-ekwughachi ma ọ bụrụ na m kọwapụtara usoro ahụ dum, ya mere, ana m agwa gị maka ya maka nkọwa ndị ọzọ isiokwu a.
Ọ bụ ezie na nnukwu ntụrụndụ a na-aga n'ihu na égbè eluigwe, anyị na-ahụ ugbu a na weebụ weebụ (internet) na-emechiwanye ọnụ. A na-eme atụmatụ mmechi nke ndị isi mgbasa ozi ọha na eze (Facebook, Google, wdg) na "New" "New Attack" na 1 igbu. Ọ dịghị onye nwere ike ịgọchite ya na n'ihi "ọgụ" dị otú ahụ nke mmetụta dị oke mmetụta mmetụta uche, anyị ahụwokwa ihe àmà nke ụzọ "Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta'na-arụ ọrụ n'ebube ya dum. N'oge gara aga, e kwere ka ndị mgbasa ozi gosi vidiyo nke igbu ọchụ nke John F. Kennedy, ọgụ 911 ma ọ bụ ISheadhead, na-enweghị ikwu na nke a nwere ike ịkpali ndị ọzọ. Otú ọ dị, ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-ekwu ugbu a n'enweghị ọgụ ma ọ bụ ikike iji nyochaa ihe ngosi ndị a New Zealand. Foto ndị nwere ike ịjụ ajụjụ banyere ma ànyị na-eme ihe dị omimi n'ebe a.
A na-emechi channelụ Vimeo m n'ime sekọnd ole na ole na-etinye ihe oyiyi ahụ, ma n'elu ihe niile m chọrọ igosi na ihe oyiyi ahụ dị njọ na ihe ha yiri adịgboroja miri emin'ihi na ị gaghị ahụ ọbara ọ bụla ma ọ bụ bọtịnụ na mgbidi. (gụkwuo ..)
Na mgbe "agha" a gasịrị, onye ọ bụla adabala n'egwu, mwute ma ọ bụ iwe ma a na-agbasapụ egwu ahụ, usoro nke transgenderization na transhumanization na-agba ọsọ na. Ọ bụ ezie na mba dị iche iche dị ka US, Russia, Turkey, China na ndị yiri ya na-ebuwanye ibu, mba ndị a nile na-arụzi ọrụ ugbu a n'ịkwalite nkà na ụzụ nke nwere ike ime ka ụmụ mmadụ ghọọ ịgba ohu dijitalụ. Nke ahụ bụ n'ihi na mba niile na-alụ ọgụ na ubi a na-ahụ anya na-eje ozi otu ihe ahụ n'azụ Mpaghara. Ikwenye a na mpaghara a na-ahụ anya dị mkpa maka inwe ike ịmecha nnukwu edemede edemede. A na-eme nke a mgbe niile site na mgba n'etiti ìgwè ndị a na-atụ egwu na site n'ụzọ amụma amụma, n'ihi na ha bụ akụkụ nke edemede edemede ahụ. Ma, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ime ka ụmụ mmadụ dị n'okpuru ọchịchị Luciferian. Ụmụ mmadụ ga-ejikọrọ ụbụrụ na ụbụrụ na ịntanetị ka ha wee nwee ike ịchọta ihe dị iche iche. Ezia a na-atụ anya ya bụ onye si n'okpukpe dị iche iche ga-esi na 'ígwé ojii' pụta (chee echiche banyere Enwetara Eziokwu, lee ebe a en ebe a maka ndị ọzọ).
Aghọtara m na ihe a nile nwere ike ịdị ka abracadabra gị, mana ọ dị mkpa ịmụ ihe a maka ya na bụ ihe niile ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ (bụ ndị weghaara ihe nkwụsị ikpeazụ a) na-agbaso. Ha na-agbasi mbọ ike ka ndị mmadụ na-asụgharị aha ha. "Kedu Transhumanization? Ihe dị iche iche?Anụrụ m ka ị na-eche echiche. Ee, transhumanization na singularity. Ọ dị ezigbo mkpa ịdeba ama okwu a. Ulo oru ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbaso ihe odide okpukpe ndị a na-agba ọsọ gaa n'ọgụ ukwu maka Jerusalem, ma mejuputa iwu ndị na-eme ka ndị mmadụ gbanwee ma ọ bụ transgenderization. Ihe e kere eke netwọk 5G; itinye data data DNA; iwebata iwu nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa; akwalite iwu transgender; ha niile na-enye aka n'ekpere a (lee ebe a en ebe a). Ya mere, ha niile ga-akpọ ya 'nnabata ukwu', dịka m na-akpọkarị ya. Ana m akwado ya isiokwu a mụọ ya nke ọma, ka ị wee hụ site na nnukwu foto. Were nsogbu iji gụọ isiokwu ndị ahụ n'okpuru njikọ na-acha anụnụ anụnụ ka ihe nnapụta ukwu wee ghọtakwuo gị.
Ọ bụrụ naanị na anyị nwere ike ikwubi na ọtụtụ ndị mmadụ ghọtara na ụwa dum site na mgbasa ozi na ụdị Trumanshow eme n'eziokwu, ebe a na-egwu ndị mmadụ site na mwakpo a na-ebo ebubo iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya dị egwu. Mgbe ahụ usoro ahụ nwere ike ịkwụsị. Ịkwalite mmeghe bụ usoro dị mma iji mepụta ọgba aghara. Ozugbo enwere ọgba aghara, oku nke 'ogwe aka dị ike' na-apụta na-akpaghị aka. Naanị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ amalite ịhụ na a na-ahụ ihe ndị a na-eme, a gaghị egbochi ịkọwapụta aha na edemede ahụ.
Tags: agha, Brenton, ime nnyocha, christchurch, akara, Facebook, agba, egbe, Harrison, -ebi, etiti, ọhụrụ, ndi mmadu, -elekọta mmadụ, stream, Ntughari, egwu, ndị na-eyi ọha egwu, video, mmiri, iwu, youtube, Zeeland
Anyị ekwesịghị ichefu na anyị bi n'otu oge dị ka Noa. Ọtụtụ ka dị ọcha site na DNA, ma ọ dịkarịa ala, anyị ejikọbeghị na nkà na ụzụ. Ị nwere ike ịchọta ihe ịchọrọ ka iju mmiri bịa, ma ọtụtụ ndị na-achị gị ọchị.
Ndị nọ na New Zealand mere nke ọma, ha egeghị ntị n'ihe ọjọọ ma mee ka o doo anya na anyị adịghị amasị ya. N'aka nke ọzọ, ọ dịghị ihe e gosipụtara na akụkọ banyere Ndị Kraịst na-egbu n'Africa ma ọ bụ ma ọ bụrụ na Israel ekpochapụ ndị Palestinians.
A gwara ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ka ha ghara ịkekọrịta ihe nkiri ahụ n'ihi na ọ jọgburu onwe ya ma ọ bụ n'ihi na ọ ka mma ịghara ịṅa ntị n'onye ahụ. A gwaghị ya ka ị ghara ịkpọ oku maọbụ ọrụ maọbụ izu abụọ ọzọ. Ekwughị na usoro ime ihe ike na Nedflix adịghị mma maka uche. Ee mana nke a ekwughị na mgbe ahụ, ee, anyị maara taa nke ọma na nke adịgboroja.
Na mgbakwunye, o nwekwara ike ịbụ na oge a na New Zealand bụ (ịda) oge owuwe ihe ubi. Ndị mmadụ na-enwe nkụda mmụọ mgbe izu ụka a gasịrị, ị nwere ike ịlele ọnye ike nke a mepụtara, ma nke ọma ma dị njọ. Ndị otu iri na otu ahụ (obere ala) na-anọgide na-adị adị n'ihi ụfụ ọbịbịa niile e mepụtara. Ogologo oge a na-eriju nri a, ụwa na-agbagharị na steeti dị ka ọ dị ugbu a.
Enwere ihe mkpuchi n'elu nne ụwa, n'ihi ya, ụmụ nwanyị nọ n'ụwa a na-ejekwa ije na nzuzo, ọ dịghị ihe dị iche n'etiti okpukpe.
Ma anyị bụ ugbu a n'oge mkpuchi na-amalite ịkwatu na m na-amalite na-achọpụta ugboro ugboro na oge na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ya mere ihe niile ji aga ngwa ngwa n'ihi na oge ụwa ochie na-agba ọsọ.
Achọrọ m ka ha nwee obi ụtọ na ụwa ọhụrụ dijitalụ, Amaara m ebe ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ na-agba. Ọ bụ ya mere m ji chee na ị bụ eziokwu banyere Turkey!
Anaghị m esonye, ​​m na-abịa na-edebe 😎
Site na ndị enyi Ndị Kraịst m natara akụkọ banyere mwakpo na Nigeria na Egypt. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ọtụtụ ndị ọzọ metụtara karịa NZ. Ahụghị m ya na akụkọ ahụ, nwere ike bụrụ ihe kpatara m.
Stars na-enye ego maka NZ;
Na-eche ma ha ga-enye ego maka Nigeria na Egypt.
Ọfọn, Amaara m na ọ bụ onye na-atụgharị anya na Martin adịghị enwe obi ụtọ.
Ma ala ohu a abaghizi mma. Ha anọwo na-egbu mmadụ taa nke na-anọghị na 66 nkeji obere! Mgbasa ozi banyere ya wee dị ogologo oge. Gịnị bụ minit 66 ugbu a? Dị ka 'ahia', ị na-eme onwe gị onwe gị site n'ịnọgide na-achịkwa ọchịchị ahụ. Òtù ahia chọrọ ka 'pensịbe' dị mma. Ọ dị mma ma dị nkenke ihe dị ugbu a 'dị mma'. Naanị setịpụrụ ihe ndị siri ike ma gaa maka ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kwụsịrị 2 maka ọnwa n'otu oge. Ma ee, ndị ohu anaghị ama jijiji. Na-eme. Netherlands nwere nnukwu ọnụ na mba ndị ọzọ. Ọfọn, olee otú ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ebe ọ bụ na e nwere ndụ, ndị a na - enyo enyo, ndị na - elekọta ndị ọrụ, ndị na - elekọta ọrụ ahụ, ha na - ejide ọnọdụ dị elu. Mgbanwe nke ọchịchị na - emetụta m.
O nwere ike ịbụ oge ị ga-agbanwe 'mantra mgbanwe' ọchịchị mgbe ị gụsịrị akwụkwọ edemede. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọputa na mgbanwe nke ọchịchị nwere ike ime naanị site na mkpụrụ obi na-akpọte anya, n'ihi ya, ọ dị mkpa ịkọwaara ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere omume esi egwu egwuregwu ahụ. I nweghị ike ịbanye n'ebe ahụ naanị mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Daalụ Martin. Ihe odide nnabata nke ndị a na-enyo enyo na-adabere n'inwe ike na inweta ikike ka ukwuu site n'ime ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ikike. Ha na-eme ma nwee ike ime nke a n'ihi na ha nwere ikike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi, wdg ị kpọrọ ya. Ya mere, ha bu ihe ndi kwesiri ntukwasi obi, ha agagh adalapu onwe ha. Ọ bụ ya mere ha ji eme ihe niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka nke a mee, n'ọnọdụ m dị umeala n'obi, nke a agaghị eme site n'ịdị 'mara'. Ha na-achị ọchị na nke ahụ. Na mgbakwunye, ị na-ahụkarị na mmegide a na-achịkwa ejirila okwu ahụ bụ 'mmata'. Ezigbo amamihe, n'ụzọ. N'ikpeazụ, ọ bụ maka ime ihe, ị gaghị enwe ike iwepụ ihe mgbochi site na ịmara. Ịmara ma ọ bụ ịkpaghasị uche bụ naanị uche ma ọ bụrụ na i nwere ikike na nke ahụ bụ ihe ndị a na-enyo enyo ma jiri 'mmata, iji mee ka ọha na eze gaa na ndị ha na-enyo enyo iji gbanwee. Ànyị nwere ike ikwe ka ekwenyeghị?
Anyị nwere ike ma echere m na ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị maara onye na-achịkwa ndụ gị (mkpụrụ obi gị). Mgbe ahụ, ị ​​ga-emebi edemede ahụ ma gharakwa ịgba egwu ahụ (nkedo) dịka iwu. Dịka ọmụmaatụ, nke a na-eduga ná nchụpụ nke okpukpe, n'aka ekpe na nke ziri ezi ma ọ bụ, na okwu doro anya, na agaghịzi arụ ọrụ n'ime usoro (dị ka ọrụ). Nke a ga - eme na masse, mana na mkpụrụ obi anyị nwere ike ịba ụba / kpochapụ ihe (site na akpa akwa nke mkpụrụ obi nọ)
Na okwu "amara" ejirila mgbasa ozi ndị ọzọ ejiri achịkwa, ekwetara m na gị.
Daalụ maka ebe ma ọ bụ okwu okwu.
Ihe a na-eme ugbu a. A na-egosi ndepụta dị ka ọ bụrụ
anọchite anya otu ìgwè. Nke a na-ama ụma nke a na-enyo enyo, ndị na-enyo enyo, iji mebie ma wepu otu ìgwè na ya ma si otú ahụ nwee ike ịmalite iwu iwu a na-enyo enyo. Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-emegiderịta ndị iro na-aghọtahie na a naghị ahọpụta ma ọ bụ họpụta Tarrant maka nnọchite otu. Ọ bụrụ na Tarrant gaara eme ihe, ọ ga-anọchite anya onwe ya ma ọ dịghị onye ọzọ.
gụọ isiokwu a ọzọ na nkea:
N'ezie, ọ dị oke mfe.
A na-eji ihe eji eme ihe ngwa ngwa iji mepụta ngwa ngwa iji mee ka ndị na-achị achị chee na a ga-ewepụ ya.
Nke ahụ bụ osisi, gunpowder, ọla, tankị, ụgbọelu, ngwá agha nuklia, ma mgbe ahụ ... ..
Mgbe ahụ internet wee bịa.
Ntuchi site na mmechi, nnyefe ego ngwa ngwa, njigide nzuzo, nnukwu nwaazụ igwefoto onyunyo, ndị na-eyi ọha egwu ọgụ, wee na-emechikwa nnwere onwe.
George Orwell enweghị ike iche n'echiche a. Nke a bụ 1984 mana mgbe ahụ, 1000 ugboro njọ.
Intanet bụ onyinye maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị / ndị na-azụ ego na ndị mba ọzọ.
Na nwa amaala nzuzu ahụghị onwe ya, ọ ga-akwụsị ihu igwe.
O nweghị ihe ga - enyere aka na nke a ọzọ.
Bụrụ ndị ezinụlọ gị, ndị enyi na ndị ị hụrụ n'anya n'anya ma kwe ka Chineke nye gị ihe ngwọta
Onye nlekọta ISRAEL na-enye aka na nzuzo.
Anyị nwere nwa okorobịa na-eto eto, 28 afọ, onye na-enye ọzụzụ nke anụ ahụ na ọtụtụ ego ndị e ketara eketa, ndị na-agagharị n'ụwa, foto ihe niile, onye ọ bụla hụrụ n'anya, mgbe ahụ, ọ na-eme ka mmadụ gbuo onwe ya.
Ihe anyị nwere n'ezie bụ onye gburu mmadụ, 42 afọ, site na ndị Juu, zụrụ azụ megide ndị Palestaịn ma jee ozi na Southern Syria na Idlib na al Qaeda, na-abanye na Turkey.
Ụmụ nwanyị 4 "ndị nlegharị anya" nyere aka na "njikwa na ngwa ngwa" na ndị uwe ojii na-eyi ọha egwu na-enye onye omere nke abụọ.
N'oge ụwa ya na-ejegharị dịka "nwa okorobịa nke na-agagharị agagharị," anyị enweghị usoro mgbasa ozi. Anyị enweghị foto ụlọ akwụkwọ, enweghị akụkọ ihe mere eme, enweghị akwụkwọ, enweghị akụkọ ihe mere eme, onye ọzọ "efu" dịka "Sander Hook" na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'oge a, o mehiere nke ịbanye n'ime ebe ndị Russia na ndị Siria na-ekiri, ebe VT na-enweta ihe nkenke onwe ha kwa ụbọchị. Ha maara ya, mgbe niile, o kwesịrị ịbụ President Assad. Na na na? CNN ekwughị okwu ahụ?
Nsogbu na VT bụ mgbe ha na-ewere Ụgha Ụgha kama ịbụ hoax, bụ echiche m.
Ọ bụrụ na e nwere ezigbo ndị ahụ, ndị ikwu na-anwụ anwụ (na-abụkarị nne) ga-achọ nkume ala. Ọ bụ ezie na ọ na-ewe ọtụtụ afọ.
Nke a bụ isi, ndị nne (nna) ga-eji ihe niile chọpụta, ha agaghị ahapụ otu ụbọchị n'enweghị nsogbu ndị ọchịchị etcetera. Nke ahụ bụ isi.
N'okwu nke a, a na-ekwu na ndị na-eme egwuregwu na-eti mkpu na telivishọn na redio naanị, mgbe ahụ, ọ dị ka ọha na eze na ndị òtù ezinụlọ na-arahụ. Mgbasa ozi nwere ike
Site na ọkọlọtọ ụgha Ọ dịghị ihe ọ bụla a pụrụ ikwu na ihe ndị nwere ike ime nwere ike ime ndị ikwu na ihe omume nke a, ha nwere 'ihe niile' n'aka nke aka ha
Erdogan, 'super-Muslim', na-egwu egwuregwu ya na ụmụnna ya nọ na West site na-ekwupụta egwu. Site n'ụzọ, ọ dị elu ogologo na magazine Time? Ndị niile na-eme ihe nkiri na-eji otu edemede ahụ eme ihe nanị mgbe ndị mmadụ na-enyo enyo na enyela ikike maka ya. Anyị na-achịkwa ndị nnabata, ndị si mba ọzọ, nke a na-eme n'ụwa nile. Ha na-ezochi ya site n'aka ndị nkịtị. Nke a na-emetụta ndị bi na Turkey. Okpukpe dị ka ụzọ mmegbu.
@zalm, echere m na ihe VT dị nso eziokwu..Christchurch bụ ebe egwu Mossad a maara nke ọma
Mossad nledo nchara 'nke a na-achọgharị n'ihi ala ọma jijiji nke Christchurch'
A na-ebo Mossad nzuzo ọrụ nzuzo Israel ebubo ma ọ bụ na-eduzi otu nchịkọta ọgụgụ isi na New Zealand bụ nke a na-achọpụta n'ihi ala ọma jijiji nke Christchurch nke February.
Ọ dị ịrịba ama ịhụ na aha mossad na-aga n'ihu na-ada n'oge ụdị ọrụ ọkọlọtọ dị iche iche na-eche echiche nke Fox mgbasa ozi mgbe 9 / 11 gbasara Amdocs, Comverse wdg.
Otu ihe ọzọ merenụ, okpukpu abụọ ugboro ugboro, ugboro atọ a na-eme ihe.
Ha na-atụpụkwa ihe ọ bụrụ na ha ekweghị gị.
Ana m aghọta site na mgbasa ozi na otu Tarrant nọ n'ụlọ mkpọrọ na New Zealand maka mwakpo ahụ. M ghọtara na ọ dịghị foto e bipụtara mgbe ọ na-arapara ??? Kpọọ akara ajụjụ. Apughi ikpochapu ya na okpukpu abuo abia n'ulo mkporo ma obu mee ka Tarrant dina n'osimiri ya na mmanya di nma n'aka ya. Mgbe ahụ nweta ihe ọhụrụ na ọ bụ n'ihu. Na-agagharị n'ụwa.
Na vidio ndị gbara ọkpụrụkpụ ị nwere ike ịmepụta ndị na-abụghị ndị dị adị
Nke ahụ ziri ezi, ị mere ka o doo anya na saịtị gị. Enweghi ike igosi vidio 'Original' nke Tarrant na New Zealand, mmejọ. Ha malitere ime ka ihe niile na ebe nchekwa ahụ kwụsịrị. Enwere obi abụọ banyere 'eziokwu'. Anyị aghaghị ikwere "eziokwu." Naanị okpukpe.
Ha na-arụ ọrụ na okpukpu abụọ, njirimara ndị na-adịgboroja wdg na ọ bụ ụwa ọgụgụ isi, ya mere, vd vidio vidio, usoro nyocha ihu igwe na-ahụ dịka vidio na-enweghị isi nke Bell Pottinger kpatara. Ma ihe doro anya bụ na òtù Zionist n'ime ụwa ọgụgụ isi enyela ọhụụ iji dozie ma na-achịkwa, karịsịa n'etiti ndị Alakụba na Zionism, gụnyere Ndị Kraịst ozioma. Ebe Christchurch na-agwa ..
Ọtụtụ akụkọ na ndị mmadụ na-anata ụgwọ ọrụ maka posts na Facebook na mmekọ mmekọrịta.
Enweghị òkè ọ bụla a ga-ahapụ ka ị ghara ịṅa ntị n'onye ahụ. A na-enye iwu, ikpe ikpe ụlọ mkpọrọ na ihe ndị yiri ya iji jee ozi nnukwu ihe.
N'ezie enweghị ihe jikọrọ ya na ibe gị. Ha bụ ndị na-arụ ọrụ n'ememme a
Ozi olili mbụ nke ozi na NZ, akwụkwọ ahụ na-ekwu banyere 30 merụrụ ahụ (?).
"Ihe ndị a na-eme ná mba dị iche iche mere ka a kwụsị igbuchapụ Friday ikpeazụ nke ndị 50 na-efu. Ọzọ 30 ndị mmadụ merụrụ ahụ. Onye ebubo ebubo - onye 28 nke dị n'akụkụ aka nri nke si Australia - na-aga n'ihu ịnwachi ikpe. "
O meela ka ọ bụrụ na agbapụ ahụ dị ka "adịgboroja" ma ọ bụ "adịgboroja", nke ahụ ga-abụrịrị ihe mere ha ji daba na nkata. Ọ bụ nyocha nke 1 nke abụọ kachasị elu nke New Zealand, lee, ị na-aga n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ihe nkiri?
A kọwakwara ya n'okpuru
lee ihe nkiri YT na nkowa mgbe o kwuru ...
Bill Wagner1 ụbọchị gara aga
N'amaghi ihe nke a bu onye ndu. Oge mkpọrọ maka mgbasa ozi ma ọ bụ eserese bụ egbe na-ese anwụrụ.
Lelee azịza 16
chad calderone1 ụbọchị gara aga
Devin Nunez agbapụla ikpe iwu $$$ malite w / Twitter.
genesis7771 ụbọchị gara aga
Ihe kpatara ha ji egwu ndị mmadụ bụ ma ọ bụrụ na ejide ha na nke a bụ ihe niile ha na-agba mgba okpuru. Nke a bụ ebe anyị nọ taa ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emebi emebi
Youtube ihe nkiri n'okpuru
+ iwu agha ndị ha ji ọsọ na-agba ọsọ ... na okwu ndị ọzọ, ha nwere ya na shelves mgbe niile, ọ bụ nanị na-echere nke ọma ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Ee, ping-pong dị n'agbata Freemasonry amalitewo, ndị na-anụ ụda ahụ nwere ike ịnọ na-ele anya ka a na-akụ ihe nile ruo n'ókè dị elu, ma ọ bụ dị ka Kanis ga-ekwu ma ọ bụ ka m ga - asị Tanis 😀 "
Anyị na-ahụkwa Istanbul ọtụtụ etiti ozo ... nke ahụ bụ ebumnuche
Ndi Erdogan ga-emesị nweta onye nduzi dị ka nwanne Adolf Adolf maka ịrụ ọrụ maka ọdịdị ndị a?
Ma ọ bụ m na-aga n'ihu ndị agha.
Nwee ntachi obi anyị ga-ahụ ya.
Ị na-enweta nke a ma ọ bụrụ na ị na-enye nsogbu ime ??
Nwoke ahụ ọ na-ebu karama ọbara ugbu a? Ihe ọzọ ọ ga - abụ. Na-ekpechitere onwe gị
" Ntụle Brenton Harrison na-emegide ọgụ nke mgbochi na-emegide Turkey?
Ndị na-eyi ọha egwu wakporo 24 Oktoberplein na Utrecht, ụjọ na mba nile! »
Nleta nile: 11.591.206
Jikọọ ndị 1.611 ndị ọzọ debanyere aha